प्रदेशको राजधानी १२ ,१२ वर्षमा फेर्नु पर्दछ — डा.अजयक्रान्ति शाक्य, सांसद, प्रदेश नम्बर तीन – Maitri News
प्रदेशको राजधानी १२ ,१२ वर्षमा फेर्नु पर्दछ — डा.अजयक्रान्ति शाक्य, सांसद, प्रदेश नम्बर तीन
maitrinews October 28, 2018
प्रदेश नम्बर तीनको प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिले तीन नम्बर प्रदेशको राजधानी कहाँ राख्दा उचित होला ? भन्ने अध्ययनसहितको प्रतिवेदन प्रदेशसभालाई बुझाएपछि अहिले त्यसको बारेमा बहस सुरु भएको छ । अध्ययन समितिले भौगोलिक अवस्था, क्षेत्रफल, जिल्लागत दूरी, जनसङ्ख्या, स्थानीय तहको सङ्ख्या, पूर्वाधारको अवस्था, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्था, वातावरणीय अवस्थाका वारेमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेपछि अब त्यही प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश तीनको राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने बारेमा आगामी बैठकमा छलफल हुने भएको छ । हामीले प्रदेश नम्बर तीन प्रदेशसभाका सांसद् डाक्टर अजयक्रान्ति शाक्यसँग यही विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरेका छौँ ।
प्रदेश नम्बर तीनको प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिले तीन नम्बर प्रदेशको राजधानी कहाँ राख्दा उचित हुन्छ भनेर एउटा प्रतिवेदन नै बुझाएको छ । तपाईँ प्रदेश नम्बर तीनको सांसद् हुनुहुन्छ । यो सन्दर्भमा तपाईको धारणा के–छ ?
हो, प्रदेश नम्बर तीनको प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिले तीन नम्बर प्रदेशको राजधानी कहाँ राख्दा उचित होला भनेर दशैँ अघि प्रदेशसभामा आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
हामी अब संभवतः यही तिहार पछि बस्ने बैठकमा प्रदेश राजधानीका विषयमा छलफल गर्छौ । छलफल त्यही प्रतिवेदनका आधारमा अघि बढाउँछौँ ।
सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिले चाँहि कुन–कुन जिल्लामा प्रदेश राजधानी राख्दा उचित हुने प्रतिवेदन बुझाएको छ ?
समितिले मुख्य गरेर पाँच वटा जिल्लामा प्रदेश राजधानी राख्दा उचित हुने प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले भौगोलिक अवस्था, क्षेत्रफल, जिल्लागत दूरी, जनसङ्ख्या, स्थानीय तहको सङ्ख्या, पूर्वाधारको अवस्था, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्था, वातावरणीय अवस्था सबैको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएकाले पनि हामीले त्यसैलाई आधार मानेर छलफल अगाडि बढाउँदा सबै भन्दा उपयुक्त होला भन्ने ठानेका छौँ ।
ए, भनेपछि प्रदेश नम्बर तीनका १३ ओटा जिल्ला मध्ये पाँच ओटा जिल्लामा प्रदेश राजधानी राख्दा उचित हुने समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ?
हो, १३ वटा जिल्ला मध्ये अध्ययन समितिले वर्णानुक्रम अनुसार काभ्रेपलाञ्चोक, चितवन, नुवाकोट, भक्तपुर र मकवानपुर जिल्लामा प्रदेश राजधानी राख्दा उचित हुने सिफारिस गरेको छ । मैले अघि पनि भने समितिले त्यसका लागि विभिन्न आधार पनि पेस गरेकाले त्यो अनुपयुक्त हो भन्ने अवस्था छैन ।
यो त समितिले प्रस्ताव गरेको कुरा भयो । तपाईँको आफ्नो पनि त धारणा होला नि ?
संघीयतालाई हामीले साच्चै नै हामीले उपलब्धिमुलक बनाउने हो भने वा संघीयतालाई कार्यान्वयन गरे अनुसार नै त्यसको भावना अनुरुप हामी अघि बढ्दै त्यो सपना साकार पार्ने हो भने हामीले मेचीदेखि महाकालीसम्मका हरेक जिल्लामा पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ । हामीले विकास मेचीदेखि महाकालीसम्म अर्थात त्यहाँका गाउँ–गाउँसम्म लैजान सकेनौँ भने संघीयता खासै उपलब्धिमुलक बन्न सक्दैन । हामीले चुनावताका लगाएको ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँसम्म’ भन्ने नारासमेत सार्थक बन्न सक्दैन । त्यसैले हामीले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँसम्म लैजान सबै भन्दा पहिला गर्ने भनेको पूर्वाधारको विकास नै हो । पूर्वाधारको विकास गर्ने हो भने हामीले प्रदेश तीनमा मात्रै होइन सात वटै प्रदेशमा एउटा मात्र जिल्ला वा शहरलाई प्रदेश राजधानी बनाउनु हुँदैन । त्यो भयो भने समस्या हुन्छ ।
यो विषयमा अलिक प्रष्ट पारिदिनुहोस् न ?
हेर्नुहोस् हामीले पहिलाको अवस्थालाई नै हेर्ने हो भने पनि पाँच विकास क्षेत्र त छदैँ थियो नि होइन ? ती पाँच ओटै विकास क्षेत्रका सदरमुकाम पनि त थिए नि होइन ? त्यसले वास्तविक रुपमा विकास गर्न सक्यो त ? सकेन नि ? हो, त्यो विकास नभएको, सिहंदरवारको अधिकार गाउँ गाउँसम्म नपुगेको कारण नै हामीले यति ठूलो क्रान्ति गरेर संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनु परेको हो नि होइन ? पाँच विकास क्षेत्रले मात्र विकास गाउँ–गाउँसम्म नपुगेकाले नै हामीले संघीय संरचनामा मुलुकलाई लैजानु परेको हो भने हामीले फेरि प्रदेशको राजधानीको रुपमा पहिलेकै पाँच विकास क्षेत्रको सदरमुकामको पाराले त्यही एउटा जिल्ला वा शहरलाई केन्द्रित गर्ने हो भने फेरि पनि उपलब्धि हाँसिल गर्न सक्दैनौँ ।
भनेपछि प्रदेश राजधानीको पनि विकेन्द्रिकरण गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको धारणा ?
हो, अहिले पनि सात प्रदेशका सात जिल्ला र त्यहाँका शहरलाई मात्र हामीले ध्यान दिने हो भने मैले अघि पनि भने कुनै पनि उपलब्धि हुँदैन ।
यसका लागि के गर्नुपर्ला त ?
मेरो धारणा भन्ने हो भने, जस्तै प्रदेश नम्बर तीनमा १३ ओटा जिल्ला छन् । अहिले अध्ययन समितिले पाँच ओटा जिल्लालाई सिफारिस गरेको छ । उदाहरणका लागि अध्ययन समितिले सबै भन्दा बढी पूर्वाधार भएका यी पाँच जिल्लामा पनि काभ्रे र चितवनलाई भनेको छ । यी मध्ये कुन जिल्लामा राजधानी बनाउन पूर्वाधार पुग्छ । हो त्यही जिल्लामा सबै भन्दा पहिला अर्थात तत्काललाई प्रदेश राजधानी तोकौँ । त्यसपछि बाँकी जिल्लालाई कम्तीमा १२—१२ वर्षमा पालैपालो राजधानी बनाउँदै जाऔँ । यसो हुँदा हामीले १२ वर्षसम्म जुन जिल्लालाई राजधानी तोकेको हो त्यो जिल्लाको पूर्वाधार पूर्णरुपमा विकास गरौँ । त्यो सँगै अन्य जिल्लामा पनि विकास गर्दै जाऔँ । यो प्रदेश नम्बर तीनको मात्र होइन सात ओटै प्रदेशमा यही धारणा अनुरुप अघि बढ्न सकिन्छ । यसरी हामीले १२—१२ वर्षमा राजधानी सार्ने र त्यहाँको पूर्वाधार विकास गर्दै अघि बढ्ने हो भने हामीले मुलुकको कुना–कुनासम्म विकास गर्न सक्छौँ । हामीले नेपालमा यसको सुरुवात गरेका छैनौँ । तर, विदेशमा यसको प्रयोग भैसकेका छ । हामीले यसको उदाहरणको रुपमा पाकिस्तान, म्यान्मार, अष्टे«लिया, ब्राजिल लगायत करीव ११ वटा देशले गरेको अभ्यासलाई नमुनाको रुपमा लिन सक्छौँ । म त अझ प्रदेश मात्र होइन संघीय राजधानी पनि कम्तीमा २५—२५ वर्षमा सार्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु । हामीले यसरी संघीय राजधानी पनि सार्ने हो भने मुलुकको अन्य ठाउँको पनि विकासमा थप टेवा पुग्ने निश्चित छ । अहिले काठमाडौं उपत्यकाको जस्तो दुरावस्था हुंदैन । त्यो सँगै संघीयता कार्यान्वयन पनि उचित ढंगले भएर समग्र नेपालको विकास हुने छ ।
अहिले हेटौँडामा प्रदेश राजधानी छ । त्यहाँबाट सार्नु हुँदैन भन्ने मत पनि त्यत्तिकै छ । सार्नु पर्छ भन्ने मत पनि त्यस्तै । तपाईँको चाहिँ धारणा के–हो ?
हेटौँडा राजधानी राख्नै हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता होइन । त्यहाँ पूर्वाधारलगायतले उपयुक्त नै छ । तर, आवत–जावतका हिसावले निकै कठिन छ । कुनै पनि कुराको ख्याल नै नगरी त्यहाँ अस्थायी राजधानी तोक्दा अहिले प्रदेशसभाका सदस्यज्यूहरुलाई सहज रुपमा काम गर्ने अवस्था नै छैन । कहाँ बस्ने ? बर्षातको समयमा कसरी जाने ? भन्ने लगायतका समस्याले गर्दा निकै कठिन भएको छ । माननीयहरु जाँदा बस्ने ठाउँ छैन । होटलमा बस्नु पर्ने अवस्था छ । विविध कारणले गर्दा त्यहाँ बसेर प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने कामहरु जुन गतिमा अघि बढ्नु पर्ने हो बढेको देखिंदैन । हामीलाई त्यहाँ लामो समय बसेर काम गर्ने अनुकुलता नै बनेको छैन । यही कारण सरकार र प्रदेशसभा दुबैले राम्रो परफरमेन्स दिन सकेको छैन । यी सबै कारणले प्रदेशको जुन तिव्र गतिमा विकास हुनु पर्ने हो हुन सकिरहेको छैन ।
प्रदेशको राजधानी निक्र्यौल गर्दा पहिलो प्राथमकिता प्रदेशको केन्द्र भागमा रहेको सदरमुकामलाई दिने अन्तराष्ट्रिय अभ्यास छ । त्यसैले अहिलेलाई त्यही अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई पछ्याउने हो भने काभ्रेलाई अहिलेका लागि प्रदेश ३ को राजधानी मान्दा उचित हुन्छ । काभ्रे दूरीगित हिसावमा प्रदेशको करीब करीब केन्द्रभागमा रहेको हुनाले र अहिले तत्कालका लागि रसुवादेखि, हेटौँडा र रामेछापसम्मका सबैका लागि पायक पर्ने भएकोले मेरो व्यक्तिगत धारणा चाहिं अहिलेलाई काभ्रेलाई राजधानी बनाउँदा हुन्छ । काभ्रेलाई राजधानी बनाउँदा सवैलाई पायक पर्ने भएकाले सबैलाई मनलगाएर, समय दिएर काम गर्न सजिलो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
सात ओटै प्रदेश मध्ये अहिले गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशले राजधानी तोकेका छन् । तर, सबै भन्दा महत्वपूर्ण मानिने प्रदेश नम्बर तीनले चाहिँ अहिलेसम्म प्रदेशको राजधानी र नामाकरण पनि गर्न सकेको छैन । राजधानीको विषयमा भर्खर बहस सुरु भएको छ । कहिलेसम्म पूर्णता पाउला ?
हामी जतिसक्दो छिटो यी विषयलाई टुङ्याउनु पर्छ भन्नेमा नै छौँ । अबको बैठकमा हामी राजधानीको टुङ्गो लगाउँछौँ । त्यसपछि हामी तुरुन्तै प्रदेशको नामका बारेमा छलफल सुरु गर्छौँ । त्यो विषय पनि छिट्टै टुङ्याउँछौँ । नामको विषयमा पनि हामी समिति बनाएर त्यसको प्रतिवेदन तयार पारेर नै अघि बढ्छौँ । अहिले पनि नामाकरणका विषयमा विभिन्न नामहरु आएका छन् । ती विषयमा पनि हामी छलफल गर्छौँ । यस अघि पनि नेपालमण्डल, वागमती, नेवा–तामसालिङ, देवपत्तन, मञ्जुश्री, नारायणीलगायतका धेरै नाम चर्चामा आएका छन् । म आफैँले पनि सबै भन्दा उपयुक्त नाम छान्ने हो भने तीन नं. प्रदेशको नाम “नेपालमण्डल प्रदेश”नै सवैभन्दा उपयुक्त नाम हो भनेर त्यसका आधार–प्रमाणहरु पहिले नै मैले प्रस्तुत गरिसकेको छु र सम्पूर्ण प्रदेश सभाका सदस्यज्यूहरु र सवै पार्टीका नेतागणलाई पनि आग्रह पूर्वाग्रह छोडेर प्रदेश तीनको सवैभन्दा उपयुक्त नाम “नेपालमण्डल प्रदेश”का लागि निर्णय गर्न सहयोग गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु ।
Previous Previous post: अस्वस्थ्यताका कारण प्रधानमन्त्री ओली चियापानमा अनुपस्थित
Next Next post: युरोपियन युनियनसमक्ष परिणाममुखी दिगो हरित महानगर बनाउने मेयर शाक्यको अडान